I-Wits kuyayibhedela kweyeCAF
UTERRENCE Dzvukamanja weBidvest Wits ushaye igoli ngasekhaya ngesikhathi bedlala umdlalo weCAF Confederation Cup ngempelasonto Isithombe: BACKPAGEPIX
LUNGILE MAJOKA | January 14, 2020
KUBUKEKA kuphelile ngeBidvest Wits nomkhankaso wayo wokungena esigabeni sama-quarterfinal kwiCAF Confederation Cup.
IZitshudeni ziguqe ngo 2-1 ekuhambeni ngempelasonto zihlulwa yi-Al Nasr yaseLibya.
Iqembu likaGavin Hunt kulo mdlalo libulawe yigoli likaTerrence Dzvukamanja okube wumkhonto ogwaze ekhaya kwathi uMuhanad Alaeeli washaya elesibili le-Al Nasr.
I-Al Nasr inyukele endaweni yesithathu kwi-log ngamaphuzu amahlanu ngalo mphumela, iWits yasala emsileni ngamaphuzu amabili esakwaze ukuwaqoqa emidlalweni emine.
Amanye amaqembu aseqoqweni uGroup C, iHoroya yaseGuinea ezihola phambili ngamaphuzu ayishiyagalombili bese kulandela iDjoliba yaseMali ngamaphuzu amahlanu.
Imidlalo yeConfederation izoze iqhubeke ngoJanawuri 26. Okusho ukuthi iWits kumele igxilise umqondo wayo ekulweleni ukuqoqa amaphuzu kwi-Absa Premiership lapho inethuba lokushubisa umbango wesicoco seligi.
Isendaweni yesine kwi-log ngemuva kokuqoqa amaphuzu awu-27 emidlalweni ewu-13. Ingemuva ngemidlalo emine kwamanye amaqembu angaphezulu kwayo.
Kusasa iWits izokwamukela iBloemfontein Celtic eBidvest Stadium ngo-7.30 ebusuku.
Ngesikhathi unozinti weWits, uBrighton Mhlongo ekhuluma nabezindaba ngemuva kokuqhathwa kwamaqembu eNedbank Cup Last 32, uthe ababhekile ukuthi amanye amaqembu enzenjani kodwa okusemqoka wukuqinisekisa ukuthi benza umsebenzi abawuholelayo eqenjini. Baqhathwe ne-Orlando Pirates kulo mqhudelwano.
“Sisabe nomgqigqo omuhle (kwiligi) futhi siyazi singabadlali ukuthi sisengenza kangcono kodwa ngale kozifakela ingcindezi. Sizobhekana nomdlalo ngamunye bese sibona ukuthi lokho kusibekaphi. Sonke lapha sinenjongo efanayo,” kusho uMhlongo.
ICeltic abazodlala nayo ayizibekile phansi njengoba ihleli endaweni yesihlanu kwi-log ngamaphuzu awu-25.
Ngempelasonto iPhunya Sele Sele iqumbe phansi iBlack Leopards ngo 4-2 eDr Molemela Stadium.
“Uma ngikhuluma iqiniso nje alisekho iqembu elincane manje. Umdlalo ngamunye oya kuwona uthole ukumangala. Okusemqoka wukuthi thina singazikhathazi ngokuthi abanye benzani nokuthi bahleli kanjani kodwa kumele senze owethu umsebenzi njengoba besenza. Sigxile ekutheni sibe yiqembu elingcono. Siqhubeke nokusebenza ngokuzikhandla nokulwela imiphumela,” kusho uMhlongo.
Ushintsho ngezibonelelo zikahulumeni
UZodwa Wabantu udalule amahlazo ngobeyisoka lakhe
Inyanga ishadelwe abayisithupha ngosuku
Kuminze izangoma nethwasa eZimbokodweni
Akazimisele ngokuxolisa ngenkulumo yakhe kuTwitter uBlack Coffee